Uqeqesho lokuQeqeshelwa ukuHamba abaThuthi luqale eKocaeli | RayHaber
ikhayaETURKEYSithili saseMarmara41 KocaeliUqeqesho lwaBaqhubi bezoThutho lwaMandla aqala eKocaeli
18 / 11 / 2019 41 Kocaeli, JIKELELE, Highway, Systems Wheel Wheel, Sithili saseMarmara, ETURKEY
uqeqesho lwaqala ukuqhuba isixeko esikhulu saseKocaeli
Ukuqeqeshwa kwabaqhubi beMetropolitan beKocaeli; UMasipala waseKocaeli Metropolitan iSebe lezoThutho kunye noLawulo lweeTrafikhi kwindawo yezothutho lukawonke-wonke ophethe iTransportPark Inc. umqhubi we581 oqhuba 'uqeqesho loMqhubi weZothutho loLuntu' uya kunikwa. Abaqhubi be2, abathatha inxaxheba kuqeqesho lokuqala olwenziwa minyaka le kwaye kwinqanaba lokuvuselela isazisi somqhubi, baya kufumana uqeqesho kude kube sekupheleni konyaka ngamaxesha athile. Ekupheleni koqeqesho, isazisi somqhubi siya kuhlaziywa.
Iiyure ze8 XA UQEQESHE UKUQEQESA
Lilonke, uqeqesho lokuqala lwanikezelwa ngaphakathi kwesakhelo senkqubo yokuvuselela uqeqesho oluya kufunyanwa ngumqhubi we581. I-6 ibonelela abaqhubi kwisifundo esahlukileyo; imigangatho yomsebenzi wokuqhuba kunye nokuziphatha, ukuqhuba - Unxibelelwano lwabakhweli abakhubazekileyo, izithuthi zikawonke-wonke noqeqesho lomthetho wezithuthi, indlela yokuziphatha yomqhubi kunye nengqondo, iindlela zokuqhuba ezikhuselekileyo nezoqoqosho, uncedo lokuqala kunye nezifo zasemsebenzini. Abaqhubi baya kufumana iiyure ze-8 zoqeqesho olungaphazamiseki kuqeqesho oluya kubanjwa ngemihla eyahlukeneyo ye-8.
Ngokuhambelana noqeqesho oluqhutywa kubaqhubi, abakhweli bayakuxelelwa ukuba bayonwaba njani ezimotweni zabo kunye nendlela yokuziphatha emakwenziwe emotweni. Ukongeza, ooSodolophu beMetropolitan Municipality Assoc. Dr. UTahir Büyükakın ugxininise kulo lonke ithuba elifumanayo elithi 'isiXeko esonwabileyo seKocaeli' liya kukhunjuzwa.
Ukuqeqeshwa kweeNgqungquthela kunye nokuQinisekiswa kweZenzo zokuThuthwa kweePakethe zePakthi
Imfihlelo yokuhamba lula ukusuka eGeze ukuya e-Istanbul
UPhawu lokuThutha kwiZithili ze12 ukuya kwiYunivesithi yaseKocaeli…
Abacocekisi bamanzi abaNtsusa iNew baqala eKocaeli
Iibhasi ezineMyalezo weNtlalo kwiKocaeli
Kukho uhambo lokuthutha eKocaeli!
Zothutho Zamahala zeYKS
UkuThuthwa koLuntu ku-Kocaeli
Ukuthutha kubafundi abaza kuthatha i-YKS Examination eKocaeli
Ukuhamba ngesisa ukuya kumangcwaba eBayram eKocaeli
Izithuthi zikawonke-wonke eKocaeli 30 Simahla ngo-Agasti
Ukufika kufikile eKocaeli
Ukuhlolwa kokuhamba kwabagibeli kwiiThuthi zeAteks A.Ş
Ucoceko lweeThuthi zeeThuthi zeeThuthi, ukuKhuseleko kwamaqela okuCoca